FX-परामर्शदाता – कसरी वित्तीय बजार मा व्यापार गर्न
1. मौद्रिक बजार मा व्यापार गर्न एक तरिका
2. व्यायाम: कसरी तपाईंको पहिलो एक हिट परिवर्तन गर्न
3. गुणक के हो?
4. का लाभ के लिनुहोस्?
5. हानि बन्द के?
6. आवश्यक मूल्यांकन बताए (कच्चा तेल)
7. परिभाषित आवश्यक विश्लेषण (स्याऊ)
8. प्राविधिक विश्लेषण: परिचय
9.3खरीद र बिक्री को सुनको निर्देशन
10. विशेषज्ञ व्यापारीहरु किन Libertex मोबाइल प्रयोग नगर्नुहोस्?
धेरै मानिसहरू आर्थिक बजार भित्र वैकल्पिक गर्न एक पेशेवर मौद्रिक सम्पदा वा एक लाख रुपैया आवश्यक छ ठान्नु, तथापि, कि प्रामाणिक छैन वास्तविकता छ.
मानिसहरूलाई को ढेर हरेक दिन विदेशी मुद्रा व्यापार तर के तिनीहरूले वास्तविकता हो गरिरहेको अधिकतम विचार छैन.
म साटासाट गरेको निश्चित छु विदेशी मुद्रा पहिले एक छुट्टी मा जा भन्दा, संभवतः मुद्रा व्यापार बूथ मार्फत विमानस्थलमा मा. तपाईं एक विदेशी मुद्रा केही नगद आपूर्ति र केही अन्य मा नगद प्राप्त हुनेछ. के तपाईं फिर्ता समयमा रूपान्तरण मूल्य मा स्थापित मा परिवर्तन पाउँदा.
तपाईं छुट्टी मा थिए का एकै समयमा त्यो प्रत्याशा गरौं, त्यहाँ अमेरिकी भित्र बेरोजगारी शुल्क गिरा थिए समाचार छ र संयुक्त राज्य अमेरिका greenback शुल्क पाँच% ले गुणन थियो. तपाईं घरेलू फर्के गर्दा, तपाईं आफ्नो नजिकका विदेशी मुद्रा गर्न अमेरिका डलर कम फिर्ता परिवर्तन र तपाईं एक गरे भनेर याद 5% आय.
के बन्द पारित? सजिलो मामलामा तपाईं ट्रेडों गरे: प्राथमिक तपाईं अमेरिकी greenbacks किनेको गर्दा, दोस्रो जब तपाईं उनलाई बेचिएको र गरे 5% मुनाफा.
विशेषज्ञ खरीदारों तुलना ट्रेडों बनाउन, तर, विमानस्थलमा एक विदेशी मुद्रा बिक्री ठाउँ मा क्षेत्र लिइरहेको प्राथमिकतामा, तिनीहरू अनलाइन Libertex मंच लागू गर्न सजिलो माध्यम ठाउँ लिन, आफ्नो सेल फोन मा, दाना र कम्प्युटरको. लगानीकर्ताले अतिरिक्त मूल्य चाल आशा तरिकाहरू पत्ता, नियमित जग पैसा कमाउन बाटो मा.
गरेको वित्तीय बजारमा खरीद र बिक्री प्रयोग गरेर तपाईं कमाउन सक्नुहुन्छ कसरी सँगै हेरौं.
सबै तपाईं को आवश्यकता हो यसलाई पाँच मिनेट धीमा, एक डेमो खाता $5,000, र दुई विदेशी मुद्रा जोडी, EUR / USD र USD / CHF.
आफ्नो वैकल्पिक उद्धरण एकदम प्राय भिन्न रूपमा यी जोडी उचित उदाहरण बनाउन, र तपाईं केवल तिनीहरूलाई देखि एक लाभ बनाउन सक्छ5गर्न 30 मिनेट. तपाईं भ्रमण फर्काउने प्रतीक्षा गर्नुपर्छ छैन.
अनुमति दिनुहोस् सुरू!
1. सम्पत्ति सूचीबाट EUR / USD चयन र खरीद वैकल्पिक खोल्न. गरेको लगानी अनुमति $500 एक उदाहरणका रूपमा एक सय गुणक संग.
2. सम्पत्ति रूपमा USD / CHF अर्को व्यापार खोल्न, को समान गुणक र समान लगानी रकम प्रयोग.
हरेक विनिमय लागि, को broking इच्छा शुल्क एउटा सानो शुल्क (एक वित्तीय संस्थाले एक विदेशी मुद्रा लागि शुल्क मूल्य सक्छ कि बराबर तरिका भित्र). तपाईं विनिमय सञ्झ्यालमा यो मूल्य देख्न सक्छ. तर वित्तीय संस्थाले गर्न विपरीत मा, बिक्रेता आयोगहरु धेरै कमी हो.
3. बित्तिकै दुवै खोलन हुन्, आफ्नो ट्रेडों 'अन्त परिणाम देख रूपमा पनि अगाडि पाँच मिनेट हेर्न.
चार. जबकि पहिलो परिवर्तन लाभ दोस्रो एक व्यापार घाटा नाघ्यो, वा प्रत्येक ट्रेडों नगद छन्, आफ्नो आय लागि लक गर्न बन्द दुवै.
जब तपाईं कुनै पनि आय हेर्न सक्दैन सही यहाँ व्याख्या दुवै ट्रेडों खोल्न र तैपनि छन्, चिन्ता नगर्नुहोस्. को बजार शान्त छ भने, तपाईं एक वैकल्पिक देख्दैनन्, त्यसैले प्रस्थान यसलाई केही समय खोल्न.
हाम्रो मामला मा, USD / CHF आय को EUR / USD हानि नाघ्यो. खाता मा केहि आय प्राप्त गर्न दुवै ट्रेडों नजिकै अनुमति.
हामी बस मात्र केही मिनेटमा USD / CHF मा आय कमाएका गर्नुभएको, र कुनै पनि तरिका मा एक मूल्यांकन प्रयोग छैनन्.
एक गुणक मा मौलिक गियर मध्ये एक छ Libertex. यो वृद्धि तपाईंको विनिमय गरेको मुनाफा क्षमता गर्न तपाईंलाई अनुमति दिन्छ.
यो चित्र कसरी? यो एकदम सरल छ.
तपाईँलाई EUR किन्न आशा अनुमति / USD, आफ्नो लगानी मात्रा छ $50, र आफ्नो गुणक छ. आरोप माथि जाँदै छ भने 10%, आफ्नो आय हुन सक्छ $ पाँच ($50 एक्स 10%).
तर तपाईं एक विरोध रूपमा निर्दिष्ट यदि 20 एक गुणक रूपमा आफ्नो लगानी रकम गर्न उठ्नेछ $1,000 ($50× 20).
तपाईं देख्न सक्थे रूपमा, आफ्नो आय मार्फत उच्च गरिएको छ 20, र कसरी गुणक काम छ.
त्यो केवल ओटोमोबाइल को वेग जस्तै छ: अधिक यो टाढा छ, को छिटो तपाईं आफ्नो गन्तव्य पुग्न. तथापि, उच्च गति यसलाई ठूलो मौका संग ल्याउँछ. प्रत्येक वाहन मनसाय शक्ति किन आफ्नो revel आधारमा आफूलाई लागि राम्रो छ जो एक गति छनोट यो, सडक तल्ला अवस्था र साइट आगंतुकों कोड.
साईट व्यापारीहरु लागि, हामी एक न्यूनतम गुणक को उपयोग सिफारिस, जो बराबर 1, जो मामला मा खतराबाट जोगिन तपाईंले तिर बजार कार्यहरू.
तपाईं क्षमताहरु र अनुभव किनेको रूपमा, तपाईं पनि आफ्नो गुणक बढाउन सक्छ.
आय लिन स्वतः लक-इन एक बिक्रेता गरेको मुनाफा पेन्डिङ अर्डर छ.
लें आय प्रयोग गर्न गर्दा:
• तपाईं एक व्यापार केही घण्टा को लागि एक खोल्न टाढा जान आवश्यक र लगातार आरोप आन्दोलन अनुगमन गर्न सकिन्छ विचार गर्न अनुमति दिन्छ. यो स्थितिमा, तपाईं पक्कै पनि स्थान एक लें आय अर्डर र तपाईं एउटा चलचित्र पालन गर्न टाउको हुँदासम्म विश्वस्त आराम.
• तपाईं एक अनुकूल तरिका मा सम्पत्तिको शुल्क चाल चलचित्र हेर्दै रूपमा गरेको एकै समयमा भनेर विश्वास गरौं. पहिले स्थित एक लें आय क्रम-लक मा हुनेछ आफ्नो फाइदा mechanically आफ्नो कार्य बाँकी मार्फत, एक पटक सम्पत्ति सकारात्मक शुल्क पुग्छ, त्यसैले के तपाईं आफ्नो फिल्म हेर्न पनि रूपमा आय बनाउन.
यहाँ एक उदाहरण छ कसरी स्थानमा एक लें लाभ क्रममा:
• तपाईँले एक EUR / USD खरीद परिवर्तन खोल्न 1.0620
• तपाईं लगानी $500 एक गुणक संग 100
• सम्पत्ति दर भन्दा वर्तमान शिखर लागि चार्ट जाँच. हाम्रो मामला मा, यो हो 1.0745.
• तपाईंको लें आय क्रम तल अधिकतम दर बस अवस्थित गर्न आवश्यक, मा लगभग 1.0725
• यस उद्धरण लागि लें आय अर्डर गर्न, पहिलो सम्पत्ति एक व्यापार खोल्न र त्यसपछि मेरो ट्रेडों जाने
• तपाईं बस खोल्न गरेको EUR / USD विनिमय बाहिर छान्नुहोस् र यो क्लिक गर्नुहोस्
• / को स्टप हानि देखि भाव छनौट लिनुहोस् आय मेनु
• ले आय विषयमा, आफ्नो वांछित शुल्क सेट, 1.0725 हाम्रो मामला मा, र दोकान मा क्लिक
अब तपाईं सम्पत्ति गरेको शुल्क समायोजन बारे चिन्ता गर्नुपर्छ के न तपाईं आफ्नो चार्ट ट्रयाक घण्टा खर्च हुनेछ. आफ्नो लक्ष्य हुँदासम्म आय चरण पुगेको छ, आफ्नो व्यापार हुनेछ नजिकै स्वतः, र आफ्नो आय सीधा आफ्नो व्यापार खातामा टाढा सञ्चय गर्न सकिन्छ.
स्टप-हानि जोखिम कम गर्न व्यापारीहरु द्वारा प्रयोग पेन्डिङ अर्डर छ.
को बजार विश्लेषण गर्दा, खरीदारों पनि सम्पत्ति मूल्य आन्दोलन गलत अर्थ लगाउनु र घाटा लाग्न सक्छ. सम्भावित हानि को मात्रा mitigate गर्न, एक बिक्रेता मुख्यतया बजार परिदृश्य आधारित केही मौका सीमा सेट गर्न सक्नुहुन्छ.
यो समय को लामो समयसम्म अन्तरालहरू लागि चार्ट प्रदर्शन गर्न भइरहेको र प्रमुख व्यापार विकल्प बनाउन गर्दा भावनात्मक विवरण पन्छाउन सक्छ सुरक्षा. एक रोक्न-हानि क्रम पनि टाउको आफ्नो स्क्रिन छोडेर जानते-कसरी आफ्नो खतरा मात्रा capped छ संग एक चलचित्र हेर्न अनुमति दिन्छ.
दायाँ यहाँ बाटो एउटा उदाहरण एक रोक्न-हानि अर्डर वरपर छ:
• तपाईँले एक EUR / USD खरिद परिवर्तन खोल्न 1.0605
• तपाईं निवेश बनाउन $500 एक सय एक गुणक संग
• सही एक रोकन-हानि अर्डर गर्न, सम्पत्ति गरेको शुल्क अधिकतम वर्तमान गिरावट लागि चार्ट मा एक नजर. को न्यूनतम शुल्क पत्ता.
• तपाईंको स्टप-हानि क्रम पनि न्यूनतम दर मुनि बस अवस्थित गर्नुपर्छ, बारेमा 1.0580
• यस उद्धरण लागि रोक-हानि अर्डर वरपर गर्न, पहिलो जो पछि मेरो ट्रेडों भ्रमण सम्पत्ति एक व्यापार खोल्न
• तपाईं बस खोल्न गरेको EUR / USD व्यापार छान्नुहोस् र यो क्लिक गर्नुहोस्
• बाहिर / को रोक्न हानि देखि भाव छान्नुहोस् लिनुहोस् आय मेनु
• भित्र को forestall हानि विषय, आफ्नो वांछित लागत सेट, 1.0580 हाम्रो मामला मा, र स्टोर क्लिक गर्नुहोस्
अब तपाईं सम्पत्ति दर समायोजन बारे डर छैन न त तपाईं आफ्नो चार्ट ट्रयाक घण्टा खर्च हुनेछ. आफ्नो खतराबाट गणना र हेरविचार लगियो.
मौलिक विश्लेषण ब्याख्या
असभ्य शुल्क निरन्तर परिवर्तित छन्, तिनीहरूले OPEC विकल्प को सहायता संग प्रभावित छन्, मध्य पूर्व संघर्ष, इरान मा बढयो दि्छ र विभिन्न तत्व प्रशस्त विनिर्माण.
उदाहरणको रूपमा, गरेको जनवरी मा प्रकाशित जानकारी लिन गरौं 2016: को प्रचार-बन्द forestall रूस र OPEC असभ्य तेल विनिर्माण तल घटाउन.
फेब्रुअरी मा 16, 2016, OPEC र रूस चिसो कच्चा विनिर्माण साँच्चै सफल.
फेब्रुअरी मा 17, कच्चा तेल शुल्क देखि कूद $32.29 गर्न $34.31 (6.तीन%). अर्को लागि 20 दिन, बढ्दै भण्डारण गरिएका शुल्क, र मार्च मा 7, यो $ 40.seventy छ पुग्यो, एक उकालो thrust 26.2%.
ताजा समाचार अत्यावश्यक घोषणाहरू र सम्झौताहरू सहित प्रत्येक दिन देखाउनका. संभव टेलिभिजनमा वा-लाइन हेर्न. यस्तो मौद्रिक घटनाहरू व्यापार अलर्टमा देखा हुन सक्छ; तिनीहरूलाई पढेर मार्फत, तपाईं दर उकालो thrust वा गिरावट हुनेछ कि भविष्यवाणी गर्न सक्नुहुन्छ.
यो विधि मार्फत ट्रेडों बनाउन सामान्यतः मौलिक मूल्याङ्कन भनिन्छ.
लामो अपेक्षित अवसर, यस्तो ब्रान्ड नयाँ आईफोन एक विज्ञप्ति रूपमा, आईप्याड, वा मैकबुक, गर्न सक्छन् पसलहरुमा उद्देश्य लामो लाइनहरू. यो माग, बारी मा, यसबाहेक एप्पल स्टक को शुल्क भित्र एक नाटकीय उकालो पुस मा एक प्रभाव हुन सक्छ.
यो कुनै पनि एक हिट बिक्रेता लागि एक अद्भुत कमाई मौका दिन्छ.
गरेको दृष्टान्त हेरौं. सेप्टेम्बर मा 7, 2016, नयाँ आईफोन7सामान्य सार्वजनिक प्रदान मा परिवर्तन.
धेरै बराबर दिन, स्याउ साझेदारी देखि गुलाब $107 एक $ सय पन्ध्र गर्न.
मा परिवर्तन यो घटना सबै जानकारी पोर्टलमा समावेश, त्यसैले हामी सबै (सम्भवत, तपाईं सहित) यसको बारेमा मानिन्छ सक्थे.
सबै भन्दा प्रसिद्ध निर्माताहरु विषयमा जानकारी यस्तो अंश, उत्पादन र सेवा (फेसबुक, माइक्रोसफ्ट, गूगल, tesla, र यति मा।) प्रत्येक दिन शुरू छन्, मा-लाइन र टेलिभिजनमा. यी गतिविधिहरु प्रत्येक एक व्यापारिक चिन्ह तपाईं पहिलो दर आय बनाउन गरौं भनेर हो.
ट्रेडों मुख्यतया समाचार आधारित र अवसरमा सामान्यतः मौलिक विश्लेषण भनिन्छ, सबैभन्दा लोकप्रिय र खरीद बिक्री प्रविधी को एक.
ज्ञान र खरीद बिक्री चयनहरू लिन, जो किन्न वा सम्पत्ति बेच्न गर्न चाहे समावेश, तपाईं बजार खर्च छानबिन गर्न आवश्यक. तपाईंको सान्त्वना मा, ती मूल्यहरू चार्ट को फारम भित्र भिजुएलाइज्ड छन्.
मामला मा तपाईं एउटा वायुमण्डलीय तापमान चार्ट प्लट2दशमलव अंक, हुँदासम्म तापमान बलियो बन्न तपाईं बस अन्तरालहरू देख्न सक्छ, i.e. यो मौसम बीचमा एक सभ्य दायरामा fluctuated र त्यसपछि हुँदासम्म गर्मी मा जोडले वृद्धि र हिउँदमा कम.
पनि भाग्य मा देखाउने हुनेछ परे भित्र के भयो - यो आर्थिक बजार हो यो अवधारणा तापमान रूपमा लागू हुन्छ. त्यो प्राविधिक मूल्यांकन को सार वास्तविकता छ.
का सबैभन्दा लोकप्रिय प्रविधी मूल्यांकन गियर को एक ले अनुमति, समर्थन र प्रतिरोध, उदाहरणको रूपमा.
जब मूल्य माथि रहेको छ र अचानक बाटो उल्टाउँछ, रूपमा पर्खाल मार भने, यसलाई बढाउन समय.
जब दर पतन र त्यसपछि सबै एकैचोटि माथि Bounces, जस्तै एक बल तल्ला बन्द अप Bounces, यो लामो टाउको एउटा उत्कृष्ट संकेत हो.
को प्रयोग हाम्रो व्यापार मंच, तपाईं reversals मा मारा एक चार्ट मा अतिरिक्त रेखा प्लट सक्छ, वा त्यो दिन तपाईं किन्न संकेतक प्रयोग र संकेत प्रचार.
कुशलतापूर्वक र सुरक्षित परिवर्तन गर्न, बस यी तीन स्वर्ण निर्देशन पालना!
निरन्तर फैशन खरीद र बिक्री प्रयोग. खाता pronouncing ले: फैशन आफ्नो मित्र हो! मामला मा तपाईं शुल्क बस सकारात्मक मार्गमा बढ छ हेर्न, यस तरिका व्यापार. यो हावा साथ चलाउन सजिलो सामान्यतया छ!
आफ्नो लाभ बढ्न अनुमति, तपाईँको घाटा proscribing रूपमा. आफ्नो आय आफ्नो घाटा भन्दा बढी आवश्यक, यो कि सरल छ! यसलाई टाढा वास्तविक अस्तित्व मा जस्तै: अतिरिक्त कमाउन, खर्च धेरै कम. तपाईंको खतरा / प्रशंसा अनुपात हुनु आवश्यक छ 1:2… अथवा धेरै!
दायाँ यहाँ को 1/3 नियम: आफ्नो पैसा नियन्त्रण. तपाईं बस परिवर्तन गर्न सुरु गर्दा, लगानीको मात्रा र multipliers प्रयोग, त्यसैले तपाईं भन्दा बढी जोखिम हुन सक्छ 2% तपाईंको खाता ब्यालेन्स को. यस तरिका, एक असफल वैकल्पिक बस मूल्य टिकट भन्दा सस्ता हुन सक्छ.
तपाईंको सान्त्वना मा, हामी बिक्रेता ट्रयाकर विकसित गर्नुभएको, तपाईं एक व्यापारी रूपमा आफ्नो पहिलो कदम बनाउने हुनुहुन्छ हुँदासम्म तपाईं यी नियमहरु लीन मदत गर्न धेरै उपलब्ध उपकरण.
ती नियमहरू निम्न व्यापार तरिकाहरू पत्ता लगाउन हाम्रो निर्देशन हेर्दै मा जानुहोस्!
सफलतापूर्वक व्यापार गर्न, तिमी धेरै राम्रो बजार जाँच्न र तिनीहरूले आफ्नो तरिका पठाउने छौँ अलर्ट गर्न तीव्र गतिमा प्रतिक्रिया चाहनुहुन्छ. को Libertex इन्टरनेट टर्मिनल मूल्यांकन संग तपाईंलाई सहयोग गर्नेछ, पनि Libertex सेल रूपमा अनुप्रयोग पक्का कुनै पनि व्यापार अवसर छोड्नु छैन बनाउँछ. सफल लगानीकर्ताले को% असी भन्दा बढी प्रत्येक Libertex इन्टरनेट टर्मिनल र Libertex मोबाइल अनुप्रयोग प्रयोग.
मामिलामा को पछि राज्य कल्पना गर्ने प्रयास: तपाईं कुशलतापूर्वक को Libertex नेट टर्मिनल भित्र आफ्नो बजार विश्लेषण चलाउन छन् र एक व्यापार खोल्न निर्धारित छ, तर त्यसपछि तपाईं definately आफ्नो तालिका जाने टाढा थियो र एक आगंतुकों जाम मा समातिए दिइयो, अथवा तपाईं एउटा चलचित्र साथीहरूको गए वा पाल भ्रमण गर्न गए. को Libertex सेलुलर अनुप्रयोग प्रयोग प्रयोग गरेर तपाईं तेजी आफ्नो डेस्कटपबाट एक लामो बाटो टाढा-टाढाका रूपमा एकै समयमा सबै दर चाल गर्न प्रतिक्रिया सक्छ, i.e. मा जाँदा तपाईं वैकल्पिक सक्छ, कुनै पनि समयमा, कहीं. को Libertex मोबाइल अनुप्रयोग संग, तपाईं खुला स्थितिहरू सम्पादन गर्न सक्नुहुन्छ, साथै खुला नयाँ ट्रेडों र वास्तविक समयमा आफ्नो प्रभाव निगरानी. समग्र बजार अवस्था तपाईंलाई सफा पहिले नै हुँदा त्यो विशेष उपयोगी छ.
तपाईं विश्लेषण समय खर्च गर्न चाहनुभएको, प्रमुख चयनहरू बनाउन, को Libertex नेट टर्मिनल एक साँच्चै सही समाधान हो. यो खरीद र बिक्री मंच संग, के तपाईं हात चाहनुहुन्छ सबै दिइएको थियो गर्नुभएको: मूल्यांकन सम्पत्ति, प्राविधिक विश्लेषण उपकरण, र तोडने जानकारी. त्यस्तै, हाम्रो नेट आधारित पूर्ण मंच तपाईं एक विनिमय खोल्न अघि तपाईं हाम्रो विशेषज्ञहरु 'समीक्षा र सिफारिश अंतर्दृष्टि लाभ गर्न अनुमति दिनुभएको छ.
thru को Andriod बजार वा AppStore मार्फत हाम्रो सेलुलर अनुप्रयोग डाउनलोड, र आफ्नो मनपर्ने ब्राउजर मार्फत हाम्रो वेब प्लेटफर्म प्रयोग.